केन Follett | वर्तमान साहित्य
केन फोललेट उनी विश्वका एक प्रसिद्ध लेखक हुन्। उहाँ आफ्नो पुस्तक "धरतीको धरती" बाट विश्व प्रसिद्ध हुनुभयो, तर वास्तवमा उहाँसँग पट्टिमुनि अरू धेरै पुस्तकहरू थिए र पाठकहरू जसले "पिए" उनका पुस्तकहरू धेरै थिए।
यदि तपाईंले लेखकको बारेमा सुन्नु भएको छैन र उहाँबारे अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई तल यसो गर्न आमन्त्रित गर्दछौं किनकि हामीले यस लेखकको जीवनको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा संकलित गरेका छौं।
1 केन Follett को हो
1.1 केन Follett प्रारम्भिक कामहरू
2 'अन्य' केन Follett
3 केन Follet पुस्तकहरु
केन Follett को हो
हामी भन्न सक्छौं कि केन Follett संसारमा सबैभन्दा मान्यता प्राप्त सबैभन्दा बेच्ने लेखक हो, प्रशंसित र प्रत्येक पटक जब उनले पुस्तक बाहिर राख्छन् त्यहाँ धेरै छन् जो पुस्तक संग्रहमा जान्छन्। तर हामी लेखकको उदासीन गर्न चाहन्छौं, उसको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा अलि बढी जान्न।
यसको लागि हामीले जून १ 1949 5। मा सुरु गर्नुपर्दछ। the औं हो जब उनी कार्डिफ आइपुगेका थिए, एकदमै धार्मिक परिवारमा। Follett तीन भाइहरू मध्ये जेठी थियो र उहाँ बाल्यावस्थामा हुनुहुन्थ्यो जुन उहाँ आफ्ना आमा बुबा द्वारा चिह्नित हुनुहुन्थ्यो, मार्टिन र Veenie Follett। तपाइँलाई एक विचार दिनको लागि, तिनीहरूलाई रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न वा चलचित्रहरूमा जान निषेध गरिएको थियो।
केन Follett को लागी आफूलाई मनोरन्जन गर्न मात्र तरिका कथाहरु को माध्यम बाट थियो। यी उहाँकी आमाले कल्पना गरेका थिए र कल्पनाशक्ति र कल्पना थियो जब उसले बच्चाले गरेको थियो बाकीमा। तसर्थ, केहि गर्न को लागी, उनले धेरै प्रारम्भिक पढ्न सिके र पुस्तकहरु आफ्नो उबासी जीवन बाट उम्कने एक तरिका को रूप मा सेवा। यस कारणले गर्दा, उहाँ आफ्नो मनपर्ने ठाउँ को रूप मा आफ्नो शहर को पुस्तकालय थियो।
१० बर्षको उमेरमा, फोल्ट परिवार लन्डनमा बसाई सरे र त्यहाँ पढ्न जारी राखे। उनले युनिभर्सिटी कलेजमा दर्शनमा भर्ना गरे, कर इन्स्पेक्टरको छोरो भएकोले धेरैलाई अचम्मित पार्ने कुरा यो सोचियो कि उनी आफ्नो बुबाको पाइलामा हिडनेछन्। तर ऊ हुर्केको तरीकाले गर्दा उसको परिवार एकदमै धार्मिक थियो, त्यसैले उनी श doubts्काले भरिएका थिए र त्यो क्यारियर भनेको उसको दिमागमा के थियो भन्ने जवाफ खोज्ने तरिका हो। वास्तवमा लेखक आफैंले यो छनौटले उनलाई लेखकको रूपमा प्रभाव पारेको महसुस गर्दछ
१ 18 वर्षको उमेरमा, उनले आफ्नो उमेरका लागि एक अनौंठो परिस्थितिको अनुभव गर्नुभयो। र, जब उनी अध्ययनरत थिए र युनिभर्सिटीमा राम्रो समय बिताइरहेका थिए, उनकी प्रेमिका, मेरी गर्भवती भइन् र अध्ययनको पहिलो अवधि पछि उनीहरूको बिहे भयो। उनले क्यारियरको साथ जारी राखे, राजनीतिको बारेमा जोशिलो बने, र सेप्टेम्बर १ 1970 .० मा समाप्त भए।
केन Follett प्रारम्भिक कामहरू
भर्खरको स्नातक, Follett पत्रकारिता मा स्नातकोत्तर डिग्री गर्ने निर्णय, केहि चीज जुन "बग" लेखेर शुरू भयो। वास्तवमा उनले साउथ वेल्स इकोमा कार्डिफमा रिपोर्टरको रूपमा काम गर्न थाले।
जब उनकी छोरी, मारी-क्लेयरको जन्म तीन वर्ष पछि भएको थियो, उनी लन्डन साँझको समाचारका लागि स्तम्भकार बनिन्।
जागिर पाएको तथ्यलाई बावजुद उनले महसुस गरे कि उनको सफल अनुसन्धान पत्रकार हुने सपना कहिले पनि आउँदैन, त्यसैले उसले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यो र खाली रातमा र रातमा उसले कथा लेख्न थाल्यो। सप्ताहन्त
त्यो एक वर्ष पछि, १ 1974। In मा, उनले अखबारमा आफ्नो जागिर छोड्ने र लन्डनका प्रकाशक एभरेष्ट बुकमा सामेल हुने निर्णय गरे जहाँ उनले आफ्ना पुस्तकहरू प्रकाशित गर्न शुरू गरे, तर ती मध्ये कुनै पनि सफल भएनन्। यो आइपुगे सम्म "तूफानको टापु" एउटा पुस्तक थियो जसले केन फोलटलाई सर्वश्रेष्ठ विक्रेता समूहमा कब्जा गर्‍यो।
१ 1978 10 मा प्रकाशित यस पुस्तकले एडगर पुरस्कार जित्यो र अहिलेसम्म १० करोड भन्दा धेरै प्रतिहरू बिक्रि भएको छ। नतिजा स्वरूप, केन फोलेटले आफ्नो जागिर छोडे र फ्रान्सको दक्षिणी भागमा आफ्नो अर्को उपन्यासहरूमा पूर्ण रूपमा समर्पित गर्न एउटा भाडा भाडामा लिए। पक्कै पनि, उसले त्यो ठूलो सफलताको साथ हासिल गरेको कुरा दोहोर्याउन सक्षम नहुने डरको साथ।
केन फोलेटलाई फेरि आफ्नो झोलाहरू प्याक गर्न तीन बर्ष लाग्यो र फेरि लन्डनमा विशेष गरी सरेमा सर्न लाग्यो। र यो यो हो कि सिनेमा, थिएटर र मनोरन्जन का अन्य प्रकार उहाँलाई शहर मा फिर्ता खींच। त्यस समयमा, फोल्ट राजनीतिमा अधिक चासो लिन थाल्नुभयो। उनी लेबर पार्टीको चुनावी अभियानमा संलग्न थिए, जहाँ उनले बार्बरा ब्रोरलाई भेटे, पार्टीको स्थानीय शाखा सचिव। ऊ उनीसँग प्रेममा परिणत भयो र उनले १ 1984 in XNUMX मा उनको विवाह गर्‍यो। तिनीहरू हर्टफोर्डशायर रेक्टरीमा बस्छन्, जहाँ केन फोलटका बच्चाहरू, बार्बराका बच्चाहरू, साथसाथै उनीहरूका जोडीका साझेदार र नातिनातिनाहरू पनि छन्।
उनको कामको लागि, बार्बरा १ 1997 XNUMX since देखि स्टीभेन्जको सांसद भइन् र केन फलेटले अझै लेख्छिन्; यसबाहेक, उनले राजनीतिलाई साहित्यमा प्रवेश गर्न कहिल्यै दिएका छैनन्।
उनको लेखन दिशानिर्देशहरू नास्ता पछि लेख्न थाल्छन् र दिउँसो चार सम्म जारी रहन्छन्, जुन समयमा उनी आराम गर्न र अनावश्यक ठाउँमा रोकिन्छन्।
'अन्य' केन Follett
सामान्यतया केन Follett हामी उनको अधिक साहित्यिक पक्ष थाहा छ तर, के तपाईंलाई थाहा छ उहाँ अन्य संघहरूका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ? हो हो, विशेष गरी, यो निम्नको रूपमा परिचित छ:
डिस्लेक्सिया एक्शनका अध्यक्ष।
राष्ट्रिय साक्षरता ट्रस्टको निर्देशक समितिका सदस्य।
रोबक प्राथमिक विद्यालय र नर्सरीको स्कूल काउन्सिलका सदस्य।
Glamorgan विश्वविद्यालय बाट साहित्य मा मानद डक्टरेट।
शाही समाज को कला को सदस्य।
स्टीभेन्ज कम्युनिटी ट्रस्टको मानद अध्यक्ष।
र, आफ्नो समय पुस्तकहरूलाई समर्पित छ भन्ने तथ्य हुँदाहुँदै पनि लेखकलाई अन्य धेरै प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कसरी आफूलाई व्यवस्थित गर्ने, र कहाँ चाहिएको छ मद्दत गर्न जान्दछन्। आफ्नो परिवारको साथ धेरै संलग्न हुनुको साथै।
केन Follet पुस्तकहरु
यहाँ हामी तपाईंलाई एक छोड्दछौं केन फोललेटले प्रकाशित गरेको सबै पुस्तकहरूको सूची, कहिलेकाँही बिभिन्न छद्म नामहरूमा हस्ताक्षर गरिएको।
एप्पल कर्स्टेरिज श्रृंखला (१ 1974 1975-१-XNUMX)), साइमन माइल्स उपनाम अन्तर्गत हस्ताक्षर गरियो
र बिग हिट
जासूस श्रृंखला पियर्स रोपर (१ 1975 1976-१-XNUMX)), उनको नामको साथ हस्ताक्षर गरे
अन्य कामहरू विभिन्न छद्मनामहरू (१ 1976 1978-१-XNUMX) को साथ हस्ताक्षर गरियो
जुवनाइल उपन्यासहरू, मार्टिन मार्टिनसेन उपनाम अन्तर्गत
Kellerman अध्ययन को रहस्य वा Kellerman अध्ययन को रहस्य
शक्तिशाली जुम्ल्याहा वा वर्म्सको ग्रहको रहस्य
बर्नार्ड एल रॉस उपनाम अन्तर्गत काम गर्दछ
अमोक: लिजेन्डका राजा
जाचेरी स्टोन उपनाम उपन्यासहरू
1978 पछि तपाईंको नामका साथ उपन्यासहरू हस्ताक्षर गरे
आँधीबेहरी को टापु।
कुञ्जी रिबेकामा छ।
सेन्ट पीटर्सबर्गका मानिस।
पानी माथि रात।
स्वतन्त्रता भनिने ठाउँ।
अजि .्गरको मुखमा।
पृथ्वी सागाको स्तम्भहरू
एक अन्तहीन संसार।
अन्धकार र बिहान।
सदाको को थ्रेसोल्ड।
शताब्दीका हिस्ट, १ 1978 16, रेने लुइस मौरिससँग; (१ in जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिकाको जेंटलमैनमा शीर्षक)।
नोट्रे-डेम, २०१,, नोटर डेम डे पेरिसको आगो पछि उनको क्याथेड्रलमा पुस्तक श्रद्धांजलि।
अब जब तपाइँ केन फलेटलाई अलि राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, के तपाईं उनका अधिक पुस्तकहरू पढ्ने आँट गर्नुहुन्छ? तपाईलाई कुन मन पर्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » केन फोललेट